Fifanekena momba ny asa voafe-potoana - Votresalaire.org/Madagascar
Accueil Droit du Travail Sécurité de l'Emploi Aro Loza Mikasika ny Fiasana
Ny Fehezandalàna momba ny asa malagasy mitaky fa ny fifanekena momba ny asa dia raiketina an-tsoratra ary ny fanamabarana an-tsoratra ny antsipirian'ny asa fampiasana dia tsy maintsy homena ny mpiasa lahy/vavy ao anatin'ny roa volana hiatombohan'ny fampiasana, milaza mazava ny andraikitra sahanina, ny karama, ny sokajin'asa, ny daty ara-dalàna mampanankery ny fifanekena momba ny asa. (And.6, Lalàna momba ny Asa)
Ny Lalàna momba ny Asa malagasy dia mandràra ny fandraisana mpiasa manana fifanekena momba ny asa voafe-potoana hanao asa miendrika maharitra. Ny fifanarahana arak'asa dia mety ho mandritra ny fotoana voafetra sy tsy voafetra. Ny fifanekena momba ny asa voafe-potoana dia fifanekena voafaritra mandritra ny fotoana hanaovana azy amin'ny alalan'ny fisian'ny fetr'andro ifanarahan'ny roa tonta na mifandrohy amin'ny trangan-javatra izay azo antoka ny mety isehoany any aoriana na dia tsy miankina amin'ny nahim-pon'ny andaniny. Ny fifanekena momba ny asa voafe-potoana dia tsy tokony hihoatra ny roa taona. Ireo asa hiantefan'ny fifanekena arak'asa voafe-potoana dia tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ireo hetsika ara-dalàna ataon'ny orinasa. Ny fifanekena arak'asa voafe-potoana farafahakeliny enim-bolana dia mivadika avy hatrany ho fifanekena arak'asa tsy voafetra aorian'ny fanavaozana indroa. Ny famerenana indray ny fandraisana mpiasa eo amin'ny toerany izay nahazoana fifanekena arak'asa voafe-potoana, izay nisy fijanonana tsy mihoatra ny iray volana dia midika fa fanavaozana ny fifanekena arak'asa. Ny fifanekena arak'asa voafe-potoana izay amin'ny farany ny mpiasa dia manohy ny asa hatrany dia midika fa raikitra ho tsy voafetra ny asa ny fifanarahana arak'asa. (And.8-9, Lalàna momba ny Asa)
Ny Fehezandalàna momba ny asa mitaky fa ny fe-potoana fitsapana dia tsy mihoatra ny 6 volana; azo havaozina indray mandeha (and.36). Io fe-potoana dia voafetra araka ny fifanarahana iombonana, toy izao :
- 3 volana ho an'ny mpiasa avo lenta sy ny "cols bleus" tsy manam-pahalalàna feno ary ny mpiasa "cols blancs" tsy manana andraikitra ara-pitantanana (sokajy 1,2,3).
- 4 volana ho an'ny injienera, ny mpiasa lahy/vavy manana andraikitra fanaraha-maso na fitantanana (sokajy 4)
- 6 volana ho an'ny tompon'andraikitra ambony (sokajy 5).
Citer cette page © WageIndicator 2017 - Votresalaire.org/Madagascar - Aro Loza Mikasika ny Fiasana